Durtiin, LibreOfficen jechoota warra sarara irraa, sarara itti aanuutti walitti hin taane siqsa. Yoo barbaaddee, amala kan dhabamsiissuuf murfisa ofumaa yk hujeekaa fayyadamuu nidandeessa:
Murfisii ofumaa, keewwata tokko keessatti bakka murfisi barbaachiissuuti saaga. Dirqalii kun, akkaataalee keewwataa fi keewwata mata mataatiif qofa jiraata.
Keewwatoota hedduu keessaa, barruu tokko ofumaan murfisuuf
Keewwata keessa mirgaa cuqaasiitii, Gabatee filadhu.
Caancala Yaa'insa Barruucuqaasi.
Keewwatoota hedduu keessaa, barruu ofumaan murfisuuf
Keewwata tokko ol ofumaan murfisuu yoo barbaaddee, akaataa tokko keewwataa fayyadami.
Fakkeenyaaf, akkaataa keewwata "Durtii" tiif, dirqala murfisa ofumaa dandeessisi, kana booda keewwatawwan wara akka murfisaman barbaadduuf akkaaticha fayyadami.
Akkaataa keewwata isa akka murfisamu barbaadduu irra mirga-cuqaasi, kana booda Fooyyessi filadhu.
Bakka Murfisa keessaa, sanduuqa filannoo Ofumaan fili.
Keewwatawwan warra akka murfisaman barbaadduuf, akkaataa fayyadami.
Sarara tokko irraa bakka barbaadduutti murfi saaguu, ykn jechoota murfisaman LibreOfficen akka barbaaduuf, kana booda murfisa filatame laachuu nidandeessa.
Jechoota Baaqqee hujeekaan murfeessuuf
Atataaman murfi saauuf, jechiicha keessa bakka murfiin akka itti dabalamu barbaaddu cuqaasi, kana booda AjajaCtrl+Hyphen(-) dhiibi.
Murfi hujeekaa, yoo jecha keessatti saagdee, jechiichii kan murfisamuu, murfi hujeekaa qofaani. Jecha kanaaf, murfisii ofumaa dabalataa fayyadamu hinjiru. Jechii murfii hujeekaa kan murfisamuu, ijaarsa fuula caancalaa Yaa'insa Barruu irraa maleeti.
Barruu filannoo tokko keessaa hujeekaadhaan murfisuuf
Barruu isa murfisuu barbaadduu fili.
Meeshaalee - Afaan - Murfisa filadhu.